Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane; Maxamed Cabdullaahi (Farmaajo) ayaa Maanta oo Arbaco ah furay kal-fadhiga Lixaad Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, ka dib Laba Bilood oo ay fasax ku maqnaayeen Xildhibaannadu. Madaxweynaha ayaa sheegay in nidaamka Federaalku uu yahay mid ay qaadatay Soomaaliya inta looga qaadayo afti guud, balse ay jiraan Dad u turjuntay si qaldan, wuxuuna […]
DAAWO:-Jubbaland oo ka Hadashay Maxakamadda Lasoo taagay Wasiirkii Amniga iyo Xadhigiisa Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa dhowaan Maxkamad lagu soo taagay Wasiirkii Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo masuul kale oo lagu hayso Dambiyo ay gaysteen. Madaxwayne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid aadan oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay ka xunyihiin Xadhiga iyo Maxkamadda lasoo taagay Xubnahaasi. “Hadii sharciga lagu dhaqmi waayo, waxaynu ku noqonayaa dagaaladii […]
Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddiga farsamada maamul dhisida Galmudug, kaas oo ka shaqeyn doona arrimaha maamulkaasi oo dhowaan doorasho galaya. Guddiga ayaa ka kooban illaa 13 xubnood oo matalaya beelaha Soomaaliyeed ee daga deegaanada maamulka Galmudug, waxaana guddigu iska dhex dooran doonaa guddoomiye, kadibna waxa uu guda geli doonaan howlaha shaqo ee […]
Maanta oo arbaco ah ayaa lagu wadaa in uu furmo Kalfadhiga 6aad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kadib Labo bil fasax ah oo ay xildhibaannadu ku maqnaayeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa lagu wada in uu maanta furo kalfadiga lixaad ee Golaha shacabka iyo aqalka sare, waxaana la filayaa in uu madaxweynaha uu […]
Madaxweynaha Puntland Oo Ku Wajahan Magaalada Kismaayo
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa Maanta ku wajahan Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG u ah maamulka Jubbaland. Safarka Madaxweyne Deni ee Kismaayo ayaa waxaa ku wehlinaya xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirada,waxaana la filayaa in saacadaha soo socoda halkaas ay gaaran. Ujeedka Madaxweynaha Puntland Saciid Den ee Kismaayo ayaa waxaa uu yahay ka […]
Dawladda Somalia oo Dacwad Cusub ka Gudbisay Kenya, Kadib Diyaaradii Kismaayo
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dacwad ka dhan ah Dowladda Kenya u gudbisay Qaramada Midoobey. Dacwaddan ayaa la xiriirta xudgudubka Hawada Soomaaliya oo ay ku dhaqaaqday diyaarad ka soo duushay Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Saraakiil ka tirsan Hay’adda Maamulka Hawada Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in warqadda ashtakada ah loo gudbiyay Hay’adda ICAO. Dacwadda […]
DAAWO:-Xildhibaan Daahir Jeesow “Dad Is miidaamiyey ayaa Diyaarad ku tagay Kismaayo” +Arinta Jubbaland
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay Diyaaradii maalintii shalay ay kismaayo ku tageen Siyaasiyiin doonaya inay ka qayb galaan Caleemosaarka Axmed Madoobe. “Dad doonaya inay Sameeyaan is miidaamin Siyaasadeed ayaa tegay Kismaayo, Waxaana Masuuliyad Darro in Diyaarad Sharci darro ah lasoo qaato, Taasi oo halis gelin karta […]
Xisbiga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa maaanta u gudbiyey Maxkamadda Sare ee dalka taasoo ku saabsaneyd xayiraadii Garoonka Muqdisho. Sidoo kale Shiikh Shariif ayaa sheegay inay dacwadaas Maxkamadda Sare u gudbiyeen iyagoo ilaalinayo shuruucda dalka u taalo, wuxuuna sheegay in is hortaaggii lagu sameeyey uu ahaa mid sharci darro ah. “ […]